बेपत्ता भएका मेरा मान्छेहरु कहां छन
कि लाश देउ कि शास देउ जहा छन।
भक्षक भएर गिरफतार गरी कहा फाल्यौ
जिउदै जलाउदै ति निर्दोषीहरु कहा हाल्यौ
घर फर्कन्छु भन्दै निस्केको कैलै फर्केनन्
कहा गयो तिम्रो मान्छे कसैले सोधेनन्
बिपत्ता भएका ………………………………॥
आफनो निहित स्वार्थका लागी बलि चढायौ।
शक्तीको आडमा आपसमा हामीलाइ लडायौ।
एउटाको स्वार्थकोलागी हजारौ बेपत्ता पारयौ।
आखिर दोष के थियो र किन त्यसरी मार्यौ
केही महिना पहिले ब्रिलियन्टम्यान७१ को रुपमा पोष्तकजीले आफ्ना जिन्दगीका केहि रोमान्चक घटनाहरु प्रस्तुत गर्दा मैले पनि आफ्नो जिन्दगीका केहि क्षणहरु, जो अहिले पनि मेरो मानस पटलमा घुमिरहेका छन, लाई कुनै बेला शब्दको रुपमा उतारेर बाडुँला भन्ने सोचाई राखेको थिएं । शेखरजीका यात्रा संस्मरणहरु पनि कम्ति रोचक थिएनन । वास्तवमा त्यस्ता घटनाहरु कुनै भुक्तभोगीका व्यक्तिगत जिन्दगीमा घटेका भए पनि अरुका लागि जानाकारी वा मनोरंजनका हिसावले पनि महत्वपुर्ण हुन सक्छन ।
हुन त मेरो व्यक्तिगत भोगाइ सबैका लागि उत्तिकै रोचक नहुन सक्छन, तर पनि मान्छेको जिन्दगीमा अनुभव वा भोगाई भन्ने चिज कुनै पनि व्यक्तिका लागि अमुल्य नीधि हुन जुन समयको कडीसंगै आउंछन, अप्रिय पनि हुन सक्छन तर कालान्तरमा तिनै एउटा संस्मरण बनेर बसिरहन्छन ।
अविश्मरणीय क्षणहरुको बारेमा कुरा गर्दा “प्यार” वा “इश्क”को मामलामा म मास्टर्स लेभलसम्म पुग्दा पनि खरो उत्रिन । त्यसको मतलव म “नालायक” वा “नन रोमान्टिक” थिएँ होला जस्तो पनि लाग्दैन तर पनि प्यारको केमिष्ट्रीले नतीजा देखाउन “क्याटालिष्ट” हरु देखि लिएर “रियाक्टिङ कम्पोनेन्ट्स”हरुको पनि उत्तिकै भुमिका हुने भएर होला मेरो “प्यारको केमिष्ट्री” जिन्दगीको उर्वर समयमा खासै फिट हुन सकेन । सिधा अर्थमा भन्दा म जति “सक्षम” थिएँ मेरो परिवेश र आर्थिक अवस्था त्यति “सक्षम” थिएनन (हुन त कति हुनु पर्छ भन्ने नियम छैन होला त्यहि पनि यसले कतिपय अवस्थामा भुमिका खेल्दोरैछ) र त्यसै कारणले मैले धेरै इच्छा आकांक्षाहरुलाई शहिद बनाउंदै लगें । आउने केहि दिनहरुमा टिनएजर समयका अझै पनि मानसपटलमा घुमिरहने केहि सम्झनाहरुको बारेमा एक दुई हरफ बाड्ने कोशिस गर्नेछु ।
Posted by: पीजी Labels: संस्मरण/ नियात्रा
सिधा-सिधा जोक भन्दा, केहि घुमाउरो पारामा बनाईएका वा गहिरो अर्थ राख्‍ने जोकहरु बढि रमाईला हुन्छन। यदा कदा यस्ता जोकलाई “आर्ट जोक” पनि भन्ने गरिन्छ।
काम विशेषले गर्दा दौंतरीमा छिर्न नपाएको धेरै दिन भएछ । आउनुहोस आज केहि आर्ट जोक सहित फेरी प्रवेश गर्दैछु ।
पति-पत्नी राती गहिरो निन्द्रामा थिए । पत्नीले सपनामा उनी कोहि पर-पुरषसंग बसिरहेको बेलामा उनको पती अचानक घर फर्केको देखीछन र निन्द्रा मै बर्बराईन “...मेरो पति फर्के जस्तो छ...” । पतिले निन्द्रा मै त्यो कुरा सुने र हत्तपत्त झ्यालबाट हामफाले ।
एकजना पूजारिको साईकल चोरी भएछ र पूजारीलाई मन्दिरकै कुनै सदश्यले सो चोरी गरेको शंका लागेछ । उसले यो कुरा आफ्नो मनस्विद साथिलाई बतायो । साथिले उसलाई अर्को पाली मन्दिरमा ‘चोरी खराब कुरा हो’ भन्ने बारेमा प्रवचन दिनु, यदि चोर त्यहा उपस्थित भएमा उसको अनुहारमा त्यो कुराको असर परेको सजीलै देख्‍न सकिन्छ भनेछ।
केहि दिन पछि बाटोमा पूजारिलाई पुरानै साईकलमा जाँदै गरेको देखेर मनस्विदले सोधेछ “ मेरो तरिकाले काम गर्‍यो हैन त?” “……अँ …… ” पूजारिले अकमकाउँदैं जबाफ दियो “…… जब मैले प्रबचन शुरु गरें र ब्रह्मचर्यको बारेमा बोलें, मलाई साईकल कहाँ छोडें भन्ने कुराको याद आयो”
एकजना बिद्यार्थी भोक र थकाईले लोथ भएर आधा रातमा कोठामा फर्कन्छ। भोकले चुर भएर उसले कोठाको फ्रीज खोल्छ । फ्रिजमा, खानेकुराको नाममा जम्मा तीन ओटा स्याउ मात्रै हुन्छन् ।
बिद्यार्थीले पहिलो स्याउ काटेर खान मात्रै लागेको थियो कि, स्याउमा एउटा कीरा देखिन्छ। भोको बिद्यार्थी त्यो कीरा भएको स्याउ फालेर दोस्रो स्याउ काट्छ । दोस्रो स्याउमा पनि किरा देखीन्छ र उ त्यसलाई पनि डस्टविनमा हाल्छ ।
अब बिद्यार्थी अन्तीम स्याउ लिन्छ, कोठाको बत्ती निभाउँछ र काट्दै नकाटी आरामले खान थाल्छ ।
दुईजना जड्या कुरा गर्दै:
पहिलो: बुझीस यार, हिजो राति २ बजे म बारमा जाँड खाएर बसीरहँदा मेरो कोठामा झ्यालबाट चोर छिरेछ।
दोस्रो: अनी …?
पहिलो: तै तै, मेरो भाग्य बलीयो रहेछ, झन्डै म बर्बाद भएको……
दोस्रो: अनी के के चोरेछ त?
पहिलो: कहाँ को चोर्नु नी, आधारातमा झ्यालबाट छिर्दा मेरो स्वास्नीले म आ’ को भन्ठानीछ……।
पहिलो: ……अनी के नी!, अहिले त्यो बिचरा हस्पिटलमा छ ।